Safiirkii La Baxsaday gaadhigii gudoomiyaha Gobolka Hawd Oo Cadeeyey In gaadhigaasi uu U Shaqaynayo Safaarada Jabuuti | Gabiley Media
Safiirkii La Baxsaday gaadhigii gudoomiyaha Gobolka Hawd Oo Cadeeyey In gaadhigaasi uu U Shaqaynayo Safaarada Jabuuti
September 10, 2017 - Written by media news
Hargeysa (GM):- Wakiilka Somaliland ee Jabuuti Mr. Cabdifataax Siciid Axmed, ayaa iska difaacay eeddo uu u jeediyay badhasaabka gobalka Hawd oo ku eedeeyay inuu wakiilku Djibouti la tagay baabuur ay wasaaradda daakhiligu badhasaab ahaan isaga siisay wakhtigii uu wakiilku ahaa ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda daakhiliga.
Wakiilka Somaliland ee Djibouti oo xalay u waramay Wargeyska Geeska Afrika, wuxuu sheegay inuu la yaabanyahay “halka” uu kala qaaday badhasaabka gobalka Hawd. Danjire Cabdifataax oo ka jawaabaya su’aalaha uu Geeska Afrika weydiiyay ayaa wuxuu waraysigu u dhacay sidan:
Safiir waxa uu badhasaabka gobalka Hawd kugu eedeeyay in gaadhi isaga la siiyay oo aad gacanta ku haysay wakhtigaad wasaarada arimaha gudaha joogtay in aad ula baxsatay dalka Jabuut, arintaas maxaa ka jira?
Sida ay runtu tahay gaadhigaas wasaarada ayaan ugu shaqaynaayay markii hore, markii danbe ee laysoo magacaabayna waxa jirtay baahi dhanka safaarada JSL ee Jabuuti ah waxaanan u soo qoray warqad wasiirada arimaha gudaha iyo dibadaba aan leenahay gaadhi ayaanu u baahanahay maadaama oo ay masuuliyiintu Jabuuti imanayaa ay nagu badan yihiin, baabuur ayaanu dalbanay oo nalooguma darin miisaaniyada sanadkan wasaarada arimaha dibada, baahi awgeed ayaa keentay, waxa meesha jooga waa laba gaadhi oo gaadhi waxa noo iibiyay ganacsatada Somaliland, halka Somaliland ay safaarada Itoobiya saddex gaadhi u iibisay,baahidaas awgeed ayaa keentay gaadhigan in aan shalayna qaranka ugu shaqaynaayay maantana aan ugu shaqaynayo, marka lay bedalana safaarada ayaa ku sii shaqaynaysa.
Sida aad ka warhayso waxa jira masuuliyiin badan oo wasaarado badan joogay oo wasaarado kale loo badalay sidaydoo kale baabuurtii qaranka sidiibay ugu shaqaynayaan. Anigu ma garanaayo inankani [badhasaabka] meesha uu iga soo galay iyo gaadhigan goorta la siiyay toona, inankana anigu madax ayaan u ahaa aniga ayaa mushaharkiisa saddex biloodlaha ah u saxeexi jiray ma garanaayo sheekadan iyo meesha uu ka keenay gaadhibaa lay siiyay.
Safiir waxaad ahayd agaasimaha wasaarada arimaha gudaha, xilkii waa lagaa badalay oo wasaarada arimaha dibada ayaa laguu badalay waliba wakiilka Somaliland u jooga Jabuuti, markaas markii codsiga aad sheegatay ee baahida baabuur ee ka jirta safaaradda Djibouti laguu fulin waayay ma gacantaada ayaad ku fushatay oo waxaad kaxaysatay baabuurkii aad haysay?
Maya, anigu ma fushan qarankuna waa dawlad kaliyaata hantida qarankana meel ayuunbaa laga wada isticmaalaa, dawladeenuna waa dawlad aan wali la ictiraafin kolba sidii loo maamuli karaayo ayaa loo maamulaa hadaan joogo iyo hadaan bari meel kale tagoba meesha ay taalo ayuun baa lagu isticmaalayaa.
Markaa hadda sideed wax u aragtaa?
Wwaxaan ku leeyahay shalayna hawl qaran ayaan ku qabanaayay maantana hawl qaran ayaan ku qabanayaa, haddii aan ka tagana ka kale ee yimaada baahi badan ayaa halkan jirta markaas baabuurkaas safaarada Somaliland ee halkan ayuu shaqadiisa ka wataa, wax igu qoran iyo wax aan anigu leeyahay toona maaha, qaranka ayaa lahaan doona cidii danbe ee timaadaana way igu faa’idayn doontaa hadii Alle yidhaahdo